sheekada Jaquar Group-Jikada Qasabadaha, Tuunbooyinka Filinka Qasabada, Qolka Musqusha | WOW
Bogga ugu weyn / blog / sheekada Kooxda Jaquar
sheekada Kooxda Jaquar
2020 / 09 / 20 Qoondayntablog 7549
Markii Late NL Mehra uu ka bilaabay shirkaddiisa musqusha qalabkiisa magaalada Delhi 1960, wuxuu ogaa inay u eg tahay layli kor u kaca ah. Waqtiga lagu jiro, qasabadaha, qasabadaha, iyo waababku waxay ahaayeen shirkad cusub oo lagu daydo loona soo iibiyey alaabooyin. Qofna ma eegin qiimaha ku xirnaanta musqusha.
NL Mehra waxay soo saartay mannequin loo yaqaan 'Essco' waxayna bilawday inay sameyso kala duwanaansho qiimo-lacageed inta lagu jiro suuqa aan caadiga ahayn ee aan habeysnayn ee qalabka musqusha lagu xiro.
Wuxuu ku soo saari lahaa badeecada 'Essco' qayb ka mid ah Haryana oo uu ku dhiirrigelin doono toban sano oo dammaanad ah. Waxay ahayd qorshe kaliya oo aan lala mid ahayn dhammaan dhacdooyinkan iyadoo tafaariiqleyda aan lagula xisaabtamin inay u adeegaan xirmooyinka saxanka qubeyska oo aan la shaacin.
Ka dib farsamadan macaamiisha udub dhexaad u ah kuna tiirsan shaqada aasaasiga ah ee dhib badan iyo u heellan horumarinta, Essco wuxuu u jeestay si caan ah oo caan ah oo laga heli karo suuqa. Waxay gaartay Rs 30 lakh sanadle ah sanadkii 1985.
Si kastaba ha noqotee taasi waxay ahayd bilowgii sheekada ee shirkadda rakibidda musqusha yar.
Wax yar maahan aasaasihu inuu ogaa inuu ugu dambayn noqonayo Jaquar Group - oo ah shirkad soo xaroota oo dhan 3,600 crore, oo sheegata inay amar ku bixiso in ka badan 60% saamiga suuqa ee dhammaan qubayska iyo qaybaha nadaafadda ee Hindiya.
Waxaa loo qaaday heerar sare shirkadaha labaad iyo seddexaad ee qoyska Mehra, Jaquar wuxuu hada la mid yahay oo la mid yahay qalabka qubeyska lagu qubeysto iyo alaabada fayadhowrka ee Hindiya. CERA Fayadhowrka, Parryware, iyo Hindware waa tiro ka mid ah soo saarayaasha caanka ah ee gebi ahaanba ka duwan gurigan.
Jaquar xarunta adduunka ee Manesar, Haryana
Sannadihii hore ee horumarka
Sannadkii 1986, aniga iyo walaalahay Ajay iyo Krishan, waxaan la wareegay hoggaanka meheradda aabbahay. Waxaan isku darnay aasaaska hooyadeen Jai Kaur iyo weedha 'aqua' si aan u siino aasaaska Jaquar oo aan u bilowno nooc cusub oo qiimo sare leh oo ah qalabka lagu rakibo tuubada, "ayuu yiri Rajesh Mehra, Agaasimaha iyo Dhiirrigeliyeyaasha, Jaquar Group, wareysi gaar ah oo ay la yeelatay shirkadda SMBStory.
Qaybta lacagta ugu sarreysa ee qalabka musqusha ayaa sidoo kale leh qayb ka mid ah caqabadaha gaarka u ah waaxda. Natiijo ahaan waxay ahayd fasal curdin ah, Jaquar wuxuu iska caabin kala kulmay iibiyaasha iyo kuwa wax iibsan kara oo gabi ahaanba ka duwan.
Si looga gudbo dhibaatada iibiyeyaasha cabsida leh, Jaquar wuxuu go'aansaday inuu isla markiiba gaaro himilooyinka. Marka hore, Rajesh iyo kooxdiisu waxay bilaabeen inay u ololeeyaan ganacsiga Jaquar dhisayaasha, injineerada, iyo macaamiisha tafaariiqda iyadoo la adeegsanayo bandhigyo yaryar.
Shirkaddu waxay kaloo ka dhigtay caawiyaha iibsadaha inay heli karaan macaamiisha. Waxay keentay inay abaabusho oo ay u celiso alaab-qeybiyeyaasha macaamiisha, taas oo kallifaysa iyaga kalsooni iyo kalsooni ku saabsan mannequin.
Farsamadeenu waxay fariin u gudbisay kuwa wax dhisaya iyo kuwa wax iibinaya in mannequin-ka uu ku jiray muddo dheer. Ku dheji xorriyadda, waxsoosaar wax soo saarayaal adduunka ah waxay doorteen suuqyada Hindiya, waana ognahay inaan jeclaan lahayn inaan ka ilaalino iimaanka iibsadaha iyo aragtida soo jiidashada. Marka, waxaan diirada u saarnay sare u qaadida tayada koowaad, abuurista badeecad si aan uga jawaabno baahiyaha jira, waxaana sidoo kale bilownay qalab balaaran oo lagu qubeysto oo lakulmay noocyada aduunka oo dhan, ”ayuu yiri Rajesh
Mid ka mid ah wax soo saarka noocan oo kale ah ayaa ah Jaquar waaskada ugu weyn ee lagu sifeeyo biyaha, taas oo ay soo saartay 1987. Jaquar wuxuu ku helay xawaare aad u muhiim ah adeegsiga 90-meeyadii wuxuuna isbedel ku yimid aasaaskii ugu caansanaa guud ahaan suuqyadii abaabulanaa ee lagu rakibay musqulaha.
Rajesh Mehra, Director iyo Dhiirrigeliye, Jaquar Group
Taabashada qaybaha cusub
Marka la rogrogo qaabka cusub ee millennium-ka, shirkadda qoysku waxay xaqiiqsatay midka macnaheedu yahay inay runti noqon karto madaxa suuqa iyadoo la adeegsanayo kala duwanaansho.
“Waxaan go’aansanay inaan wax ka qabanno baahiyaha dhammaan qeybaha anagoo dejineyno galkayaga. Sidaa darteed, sanadkii 2000, waxaan bilownay inaan siino barkado dabaasha, qubayska qubayska, qubeyska, qolalka uumiga, iyo isboortiga. Isla waqtigaas, waxaannu muddadii saddexaad ku soo galnay shirkadda. Waxaan ku guuleysanay xulashada nalalka annagoo soo saareyno nalalka 2001, ayuu yidhi.
Dadaallada kala-duwanaanta ayaa sii waday adeegsiga 2009 markii Jaquar bilaabay kululeeyaha biyaha. Sannadkii 2010, waxay ku dartay faylalka ay ka kooban tahay qalabka nadaafadda.
Ku habboon tan labaad, Jaquar Group waa guri wax soo saar oo ay weheliso Essco (qaybta qiimaha), Jaquar (qaybta qiimaha), Artize (qaybta raaxada leh) iyo Jaquar Laydhka (doorashooyinka nalalka buuxa ee LED).
“Waxaan hadda raad ku leenahay 45 ummadood oo dhan oo maraya Yurub, Bariga Dhexe, Aasiya-Baasifigga, Afrika, iyo booska SAARC; iyo 5 moodooyinka casriga ah ee soosaarka casriga ah ee Hindiya iyo mid Kuuriyada Koonfureed ah, ”ayuu Rajesh bixiyaa.
Jaquar waxay sheeganeysaa inay soo saarto 28 milyan oo weel ah sanadkiiba, iyadoo ay suuragal tahay inay soo saarto 1.25 lakh qasabad maalin kasta.
Sanadkii 2020, 10,000 oo shaqaale xoog leh ayaa noqday 60. Rajesh wuxuu rumeysan yahay in lixdaan sano ee yar, aysan jirin xisaab hal ilbiriqsi oo loo aqoonsan karo inuu yahay isbadal sameeyaha mustaqbalka.
“Aabahay wuxuu ka bilaabay Essco meel hoose, anagana waxaan ka bilownay Jaquar eber. Waqti ka dib, waxaan si joogto ah u haynay aaminaada nafteena iyo sheyga. Waan ogeyn inaan sameyn karno mannequinkeena gaarka ah iyo mustaqbalkeena. Waxaan jeclaan laheyn inaan soo bandhigno hal shay oo laga yaabo in dukaanka Hindida ah uu ku raaxeysto ku faanista hanashada iyo isticmaalka. Xisaabintayada labaad waxay ahayd inaan abuurno heerka ugu sarreeya xilli aysan jirin wax sidaas ah, ayuu yidhi.
Jaquar qasabadda qasabadda
Habka tafaariiqda iyo COVID-19 ayaa saameynaya
Hindiya gudaheeda, shirkaddu waxay tafaariiq ka dhigeysaa iyadoo la adeegsanayo bandhigyo khibrad leh oo loo yaqaan Xarumaha Hanuuninta Jaquar. Waa xarumo u oggolaanaya go'aan-qaadashada iibsadaha iyaga oo siinaya daaqad keliya oo ay ku soo iibsadaan wax badan oo ka mid ah qalabka qubeyska iyo jaangooyooyinka.
"Waxaan hadda ku leenahay 21 xarumood xarumahan oo ku yaal Hindiya, meelahaasna waxay deggan yihiin dhammaan jawaabta Jaquar, oo laga saxay qasabadaha, qalabka fayadhowrka, xirmooyinka qubayska, xirmooyinka biyaha lagu shubo, kululeeyayaasha biyaha, iyo nalalka," ayuu yiri Rajesh, oo ay weheliso Jaquar tafaariiqda adeegsiga 4,000 xaafad ganacsade xoog leh oo ku taal Hindiya.
Markii ugu horreysay ee uu faafay COVID-19, Jaquar wuxuu isku arkay xaalad keli ah.
Dhinac, fikirka xiriir iyo runti runti waa dareentaa inuu ku xoog badan yahay suuqa Hindiya ee rakibidda musqusha. Waqti ka dib, waxay ku kortay inay noqoto qayb muhiim ah oo ka mid ah xulashada iibsiga. Bedel ahaan, dadku way ka sii fogaanayaan taabashada sagxadaha meelaha dadweynaha - qasabadaha iyo qasabadaha ayaa lagu daray.
Go'aaminta tan inay tahay mudnaanta halkaan ku habboon in la joogo, Jaquar wuxuu bilaabay qorshe loo yaqaan 'Sensor and Sensibility', oo loogu talagalay dhiirigelinta xiriir aan la xiriirin oo macquul ah oo ku saabsan musqusha iyo doorashooyinka nalalka.
Badeecadani waxay ka kooban tahay aqoonteena aqoonta u leh aqoonta iyo sida loo habeeyo badeecada hadda jirta si loo ciribtiro taabashada gacanta. Ganacsigan tayada leh ee hubaysan, ee tikniyoolajiyaddu taageerto ayaa rajaynaya in loo oggolaado kala-guur aan xaddidnayn inta lagu guda jiro qaab nololeed taabasho-la’aan ah oo loogu talagalay dhammaanba aagagga aan dawliga ahayn iyo kuwa aan gaarka ahayn, ”ayuu yidhi Rajesh.
Jaquar qalabka tuubada dareeraha ah
Jaquar wuxuu hadda isku dayayaa inuu cusbooneysiiyo wax soosaarka si buuxda u shaqeynaya. Ka dib tallaabo-tallaabo dib-u-furista warshaddeeda daabacaadda qufulka, shirkaddu waxay hadda ka shaqeyneysaa inta udhaxeysa 50% iyo 75% shaqeyntooda.
Waxay qorsheyneysaa inay sare u qaaddo tixgelinta ay siineyso xulashada nalalka iyadoo la adeegsanayo qaab warshad cusub oo wax soo saar ah. Warshadda laydhku waxay ahayd in la hawlgeliyo bilo uun ka hor, sikastaba ha ahaatee dib ayey udhacday qufulka awgeed.
"Waxaan sidoo kale qorsheyneynaa inaan ka furno qeybta soosaarka kululeeyaha biyaha Kundli 12-ka bilood," Rajesh ayaa soo bandhigay.
Qalabka musqusha iyo suuqyada nadaafadda ee Hindiya ayaa si weyn u kala jaban, taas oo siinaysa soosaarayaasha yar yar rajada ah inay kordhiyaan joogitaankooda suuqa. Si kastaba ha noqotee, Rajesh wuxuu rumeysan yahay in fayraska wax soo saarka ee yar yar ee Jaquar uu ka caawinayo inay sii wado hal talaabo ka hor kuwa ka soo horjeeda.
Xulashada xulashooyinka ee aan hadda isticmaalno iyadoo la adeegsanayo fasalka iyo qaybaha ayaa isku beddelaya tamar wadareed oo na siinaysa faa iido dagaal. Taasi waa sida dhabta ah ee aan dareemeyno inaan sii wadi doonno ka horreeyayaasha, ayuu yidhi.
Marabtaa inaad fududayso safarkaaga bilowga ah? Tababbarka YS wuxuu keenayaa dhammaan Koorsada Maalgelinta, meesha aad sidoo kale fursad ugu hesho inaad ku dejiso farsamadaada xayeysiinta ganacsatada waaweyn.
Hore:: Shaandheeyeyaasha Qasabadda Ma Shaqeeyaan? Next: Degel Cusub oo Loo Bilaabay Shirkada Isku Bedelka Jikada iyo Musqusha ee Santa Rosa CA
2021 / 01 / 15 809
Waan ka xumahay, Musqusha ayaa leh dhibaatooyinkan, ma ahan dhibaatooyin xagga tayada ah!
2020 / 12 / 12 4346